Djibril Cissé oo ka hadlay doorka weyn ee Gerrard uu ka qaatay mucjisadii Istanbul ee 2005 – Gool FM
(Champions League) 09 Sept 2018. Laacibkii hore reer France ee Djibril Cissé ayaa dib u xusuustay finalkii Champions League ay kula ciyaareen kooxda AC Milan sanadii 2005-tii magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Wuxuu ahaa mid ka mid ah kulamada kama dameysta ahaa ee ugu fiicnaa taariikhda ay ciyaartay kooxda Liverpool, iskaba daayee xitaa waxaaba la dhihi karaa waa kii ugu fiicnaa.
Kooxda AC MIlan ayaa kulankan qeybtii hore ciyaarta ku hogaamineesay 3-0, laakiin kooxda reer England ee Liverpool ayaa awooday qeybta labaa inay soo barbareyso, isla markaana ay ku qaado koobka Champions League rigooreyaal 2005-tii.
Hadaba Djibril Cissé ayaa sheegay in kabtankii hore kooxda Liverpool ee Steven Gerrard uu door weyn ee muhiim ah ka qaaday in Reds ay ciyaartaas dib ugu soo laabato isla markaana ay tartanka ku guuleysato, kadib markii qeybtii hore kaga hogaamisay 3-0 dhigeeda AC Milan
“Waa waxaan ilaabi doonin inta ka dhiman nolosheyda, Steven Gerrard dib ayuu inoo nooleeyay qeybtii labaad ee ciyaarta finalka Champions League ee 2005-tii”.
“Goolkii koowaad wuxuu ku dhaliyay madaxa isagoo ka dhex kacay difaacyada Nesta, Maldini iyo Jaap Stam, wuxuu sidoo kale sabab u ahaa goolkii aan ku dhalinay rigoorada, waa halyay aan lahayn erayo lagu cabiri karo”.